म सहमत छु। ईमेल ठेगाना सादा दृश्य / कोडमा हुनुहुन्न। पछिल्ला केही महिनाहरूमा, मैले सँधै जाभास्क्रिप्ट प्रतिस्थापन कोड गर्न सुरू गरें – यद्यपि म पदोन्नति गर्न हिचकिचाउँदछु किनकी मलाई धेरै स्प्यामबाट्सले यसलाई पढ्न निश्चित छ। म आशा गर्दछु कि तिनीहरू मध्ये धेरै JS पार्स गर्न एकदम अल्छि छन् र केवल कम झुण्डिएका फलहरू लिन्छु। म अनुमान गर्दैछु कि स्प्यामबट्स पनि "डोमेन डट कममा खाता" सूचीबद्ध ठेगानाहरू पार्सि pमा राम्रो भएको छ।
व्यक्तिगत रूपमा, म जो कोहीसँग श blog्कास्पद छु कि के उनीहरूको ब्लगमा ईमेल ठेगाना सूचीबद्ध छैन र केवल एक सम्पर्क फारम मात्र हो, तर यस्तो लाग्छ कि यो गर्नका लागि यो केवल १००% तरीका हो। म छवि ईमेल ठेगानाहरू पनि मनपराउँदछु जुन मानिसहरूले देख्न सक्दछन् तर टाइप गर्नुपर्दछ। हुनसक्छ एम्बेडेड फ्ल्यास अर्को मार्ग हुन सक्दछ। के तपाई सम्पर्क फार्म मात्र केटा हुनुहुन्छ?
"ईमेल ठेगाना सूचीबद्ध नभएको जोकोहीको संशय"… आउच! यदि मैले मेरो ब्लगमा मेरो ईमेल ठेगाना पाउन सकें भने, जाभास्क्रिप्ट ओब्फुसकेटरको साथ पनि, म दिनमा हजारौं स्पाम पाउने थिएँ।
शंकास्पद नहुनुहोस् - हामी केवल आफैलाई बचाउन कोशिस गर्दैछौं। IS को लागि सम्पर्कको उद्देश्य ताकि व्यक्तिहरू अझै हामीलाई सम्पर्क गर्न सकिएन स्प्यामबट्सको लागि खुला नगरी।
फेब्रुअरी १,, २०११ 19:१:2008 अपराह्न
@ स्टेफेन तपाई सही हुनुहुन्छ कि स्प्याम बट्स लेख्ने धेरै प्रोग्रामरहरू आलसी छन्। मेरो मतलब, तपाईं केवल परिणामहरूलाई पार्स गर्न सक्नुहुन्छ http://tinyurl.com/yuje9z र स्पाममा सयौं हजारौं ठेगानाहरू पाउनुहोस्।
तर जाभास्क्रिप्टमा लुकाइएको ईमेल ठेगानाहरू, छविहरू र फ्ल्यास सुरक्षित छैनन्। हेर्नुहोस् http://www.cryptologie.com/SpamFull.pdf केही वर्ष अघि अध्ययनको लागि। "ती मध्ये केही ASCII सुरक्षा र आधारभूत जाभास्क्रिप्ट वा फ्ल्यास कोड समाधान गर्दछ।"
उत्तम सुरक्षा अझै पनी ईमेल ठेगानाहरू प्रकाशन गर्न रोकिन्छ, र एक प्रयोग गर्नुहोस् वेब फारम सट्टा।
फेब्रुअरी १,, २०११ 21:१:2008 अपराह्न
म बुझ्छु तपाईं दुबै के भनि रहनु भएको छ। मेरो लागि, एउटा सम्पर्क फारम अनुभूति गर्दछ 1-800 नम्बरको सट्टामा व्यवसाय कार्डमा मोबाइल नम्बर। यो धेरै कर्पोरेट / समर्थन टिकट महसुस गर्दछ।
मैले अहिलेसम्म मेरी श्रीमतीको ईमेलमा जाभास्क्रिप्ट ओब्फुसकेसन गरेको देख्छु http://www.rachelsteely.com, तर त्यो साइटहरू केवल एक महिना मात्र भयो। म साथीलाई कहिले पनि उनीहरूको ईमेल ठेगाना जंगलीमा राख्न भने हुँदैन यदि उनीहरूलाई थाहा थिएन कि उनीहरू के गर्दैछन्। मैले सम्भवतः लामो समयदेखि त्याग्ने थिएँ, यदि मसँग मेरो एन्टी-स्प्याम सफ्टवेयरको रूपमा Google छैन भने।
मैले तपाईंको ब्लग पोष्ट एकदमै रमाईलो पाएँ, तर मलाई कसरी बुझ्दछु यो कसरी कार्य गर्दछ।
यदि तपाईं यो फारम भर्नुहुन्छ भने, कसरी स्पाम बट्स तपाईंको ईमेल ठेगाना प्राप्त गर्दछ?
यदि साइटसँग तपाईंको ईमेल ठेगानाको साथ क्षेत्रहरू सबै समय लुकेका छन्, तब यो स्पाम बट्स कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छ।
तर जब तपाई यसलाई भर्नुहुन्छ, के तपाई केवल सबमिट हिट गर्नुहुन्न, र त्यसपछि लुकेका क्षेत्रहरू टाढा जान्छन्, हैन? के स्पाम बोटसँग त्यस पृष्ठमा प्रोग्राम सेट गरिएको छ जुन तपाईंले टाइप गर्नुभएको कुरा क्याप्चर गर्दछ वा साइटले लुकाएको फिल्डमा के राख्छ तपाईंले प्रयोग गरिरहँदा?
मैले बुझिन के तपाई यसलाई अधिक वर्णन गर्न सक्नुहुन्छ?
र के गर्न सकिन्छ? तपाईं कसरी फाराम कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ जुन स्पाम बट्सले यो गर्न सक्दैन? के यो ईमेल ठेगानाहरूका लागि लुकेका फिल्डहरू प्रयोग नगर्ने कुरा हो वा यो भन्दा बढि हो?
एक आगन्तुकको रूपमा, तपाईं कुनै खतरामा हुनुहुन्न। मुद्दा यो फार्म राख्ने व्यक्तिको लागि हो। एक स्प्यामर 'हाईज्याक' फाराम सक्षम गर्दछ र यसलाई प्रयोग गरेर स्पाम पठाउँदछ। यो एउटा भयानक अभ्यास हो जुन कम्पनीले उनीहरूको वेबसाइटमा डिप्लोय गरेको छ।
एउटा अर्को प्रश्न ...। यदि मैले पूर्ण रूपमा मेरो ईमेल ठेगाना पृष्ठमा राख्नुपर्दछ भने त्यसो गर्न उत्तम तरीका के हो? के यो हेक्सेडेसिमल क्यारेक्टर कोड प्रयोग गर्न सुरक्षित छ?
स्पामर्ससँग धेरै जटिल क्रोलि mechan म्याकेनिज्महरू छन् जुन इ-मेल ठेगानाहरू थुप्रै तरीकाले काट्न सक्षम छन्। म इमान्दारीसाथ वेब पेजमा मेरो ईमेल ठेगाना राख्नबाट थकित हुन्छु र यसको सट्टामा, सम्पर्क फाराम विस्तार गर्दछु।